Warshadda Alaabada Shaybaarka | Soo-saareyaasha Alaabada Sheybaarka Shiinaha, Alaab-qeybiyeyaal
Kaadida Kaadida Weelka Kaadida Tijaabinta Muunad Kaadi Kaadi ah
Loogu talagalay in lagu ururiyo laguna keydiyo shaybaarada adag ama dareeraha ah, oo ay kujiraan cuntada, daawada, kaadida iyo saxarada, weelal madadaalo ah oo ku haboon shaybaarada sawir qaadka leh (tusaale, midabka kaadiheysta iyo porphyrin) ama marka loo baahdo in aan la tusin waxa ku jira.
Tayada Shaybaarka Caafimaadka Waxay Isticmaalaan 10ul 200ul 300ul 1000ul 1250ul Midab Buluug Jaalaha Caddaanka Cad Cad
1.Made tayo sare leh oo PP leh hufnaan wanaagsan.
2.Waxaa loodiray Gilson / Finland / Eppendorf Pipettors.
Pipette Kala-wareejinta Caafimaadka Ma-dhalayska ah ee Caafimaadka ah 0.2 0.5 1 3 5ml 10ml Pasteur Pipette
Pasteur Pipettes waxay ka samaysan yihiin waxyaabo polymer-LDPE hufan ah, oo inta badan loo isticmaalo in lagu daadiyo, lagu wareejiyo oo lagu qaado xalka oo si ballaadhan loogu dabaqo aagga dhaxalka, daawada & daroogada, ka hortagga cudurrada faafa, kiliinikada, bayoolajiga, shidaalka, iwm.
Sahayda Sheybaarka 0.1ml 0.2ml 8 Strips Pcr Tube
Tuubbada PCR-da dhuuban ee la soo saaray waa mid isku mid ah dhumucda derbiga si loo hubiyo in nidaamka falcelinta lagu kululeeyo si isku mid ah isla markaana si la yaab leh u yareeyo uumi-baxa; Naqshadeynta V-qaabka faleebada xagalka tuubbada waxay ku habboon tahay noocyada badankood ee kuleylka kuleylka; DNAse / RNAse pyrogens bilaash ah iyo mid aan lahayn.
Isticmaal Laboratory Wholesale Wholesale Clear Glass Cover Glass Microscope Slide
Muuqaalada microscope-ka caadiga ah waxaa loogu talagalay tijaabooyinka caadiga ah ee aan dheeri dheeri ah ama la qabsi lahayn qorayaasha otomaatiga looga baahan yahay taariikh-cilmiga cudurada, dhiiga, cytology, microbiology iyo iwm.
Volume Lab Digital Pipette Volume Isku-hagaajin Kara Soo-saare Micropipette
Boodhadhka dijitaalka ah waa aalad shaybaar oo inta badan loo adeegsado kiimikada, bayoolajiga iyo daawada si loogu qaado mugga cabbirka dareeraha ah, badiyaa sida qalabka wax lagu kala iibsado.
Hot Iibi Fur Cap 1.8ml Tube Qaboojiyaha Cryo Tube 2 Ml
Tubada Cryo / cryovial waxay ka samaysan tahay maadada PP fasalka Caafimaadka waana sheybaarka ugu haboon ee loo isticmaali karo keydinta muunada noolaha
Microscope Muraayadaha Daboolka
Khariidadaha Muraayadda Muraayadda (Microscope Glass Cover Sclips) oo laga sameeyay muraayad cad oo si toos ah u muuqata.
Dabooladu waxay faa'iido u leeyihiin in tijaabooyinkaaga si siman loo hago oo la dhigo goob lagu arko mikroskoob.